Aragti Xildhibaan: Madaxweyne Ku Shaqeey Xaaladdii Aad Madaxweynaha Ku Noqotay – Kalfadhi
Madaxweyne Farmaajo waxaa laga rabaa in uu ilaaliyo shuruucdii uu ku dhaartay iyo dalkii uu u dhaartay ee tusaale nooguma soo qaadan karo nidaam federaal ee dalal kale kajira sida: Maraykanka, Ruushka, Shiinaha, Jarmalka iyo Koonfur Afrika!
Madaxweyne Farmaajo waxa uu ku dhaartay in uu xilkiisa u gudanaayo si daacad ah oo danta dalka, dadka iyo diintu ku jirto, dhawrayana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla, sida ku cad qodobka 96-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Dowlad gobolledyadu ma ahan dowlado madax-bannaan ee waa dowlad gobolleedyo xubno ka ah dowladda federaalka waxaana waajib ku ah in ay u hoggaansamaan nidaamka dowladeed ee lagu heshiiyay, ilaaliyaana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale dalka u yaalla.
Sida ku cad dastuurka KMG qodobkiisa 54-aad xukuumadda Federaalka waxay u madax banaantahay oo ay awooddeeda iyo mas’uuliyaddeeda yeelaneysaa:
2. Difaaca Qaranka
3. Jinsiyadda iyo Socdaalka
4. Siyaasadda Lacagta
Sidoo kale iyada oo la qaddarinayo nuxurka iskaashi ee lagu shaqaynayo dowlada federaalka waxaa waajib ku ah in ay fuliso una hoggaansanto qodobbadaan dastuuriga ah ee ku cad qodobka 53-aad ee dastuurka KMG:
Xukuumadda Federaalka waa in ay Dawlad- gobolleedyada kala tashataa wada-xaajoodyada la xiriira kaalmada dibedda, ganacsiga, cahdiyada ama arrimaha muhiimka ah ee la xiriira heshiisyada caalamiga ah.
Marka ay wada-xaajoodyadu si gaar ah u saamaynayaan danaha khuseeya dowlad gobolleedyada xukuumadda Federaalku ergada wada-xaajoodka geleysa waxaa kaabaya wakiillo ka socda dowlad gobolleedyada.
Xukuumadda Federaalka marka ay ka hawlgelayso wada- xaajoodyada, waa in ay ilaalisaa danaha dowlad gobolleedyada.
Sidaas daraadeed, madaxweynaha waxaa laga rabaa in uu ilaaliyo shuruucdii uu ku dhaartay iyo dalkii uu u dhaartay ee tusaale nooguma soo qaadan karo nidaam federaal ee dalal kale kajira sida: Mareykanka, Ruushka, Shiinaha, Jarmalka iyo Koonfur Afrika. sababtoo ah nidaamka dowladeed ee Soomaaliya kajira waxa uu ku samaysmay xaalad gaar ah waxa uuna u baahanyahay in loo ilaaliyo si gaar ah. Lamana barbardhigi karo dowlado leh nidaam dimuquraadi ah oo qaarkood boqolaal sano dowlado soo ahaayeen, xag amni iyo xag dhaqaalena ugu horreeya dunida.
Haddii aan la ilaalin wixii aan ku heshiinay; wax aanaan heshiis ku ahayn horumar Soomaaliya uma keenayaan, kaliya dib u dhac iyo inaan is dilno ayaan horseedaynaa ee dalka iyo dadka aan u turno mudane madaxweyne.
W/Q: Mahad Maxamed Salaad
Xildhibaan Golaha Shacabka